5 सबैभन्दा आकर्षक लुकेको रत्न मा बेल्जियम | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >5सबैभन्दा आकर्षक लुकेको रत्न मा बेल्जियम
एक ट्रेन सेव तपाईं ल्याउन छ5सबैभन्दा आकर्षक लुकेको रत्न बेल्जियम मा भ्रमण गर्न! त्यहाँ छ अधिक बेल्जियम भन्दा बस बियर. विचित्र महल पत्ता, गोप्य मूर्तिहरु, र शहर थिए भन्ने अझै छैन आफ्नो रडार तर सम्पूर्ण हुनुपर्छ! बेल्जियम को कुनै अभाव छ hidden gems तपाईं चाँडै संग प्रेम पर्नु.
1. को Underrated शहर को मेकलेन
मेकलेन ब्रसेल्स र आन्ट्वर्प बीच आधा बाटो हो. शहर को केन्द्र gabled पुनर्जागरण घरहरू द्वारा विशेषता छ, ध्यान दिएर पुनःस्थापित, जबकि बजार छ गोथिक कैथेड्रल द्वारा प्रभुत्व एक छेउमा र टाउन हल, पनि गोथिक, अन्य मा. मेकलेन अक्सर बेवास्ता छ को पक्षमा अधिक लोकप्रिय गन्तव्यहरू. तथापि, कोर्नु को सतह मुनि र तपाईं चाँडै पत्ता एक सुन्दर बेल्जियम बन्दोबस्त भन्दा बढी छ कि आफ्नो समय को लायक गर्दा देश र निश्चित को एक लुकेका रत्न बेल्जियम मा भ्रमण गर्न!
ब्रसेल्स गर्न Mechlen गाडिहरु
एंटवर्प गर्न Mechlen गाडिहरु
घेंट गर्न Mechlen गाडिहरु
Liege गर्न Mechlen गाडिहरु
2. Tienen को चिनी शहर
साना सके शहर (चिनी संग!) के तपाईं कहिल्यै छ भने आनन्द चिनी घन सँगसँगै आफ्नो ताजा कफी वा चिया को कप, त्यसपछि पक्कै पनि शायद Tienen को सानो सहरमा प्रशोधन हुनेछ. यो सानो शहर छ छैन टाढा देखि लोवेन. पिटेको मार्ग बन्द छ र Flanders मा फ्लेमिस Brabant को धेरै मुटु मा, यो बन्दोबस्त थियो एक पटक मा हृदय को रोमन सेरामिक्स र ग्लास बनाउने! यसले बेल्जियम मा लुकेका रत्न भ्रमण गर्न मध्ये एक छ मुख्य कारण मध्ये एक छ!
आँखा पूरा भन्दा Tienen गर्न को लागी अधिक छ. को स्पष्ट मुख्य चर्च बाहिर हेर. माथि सोख माहोल र नमूना स्थानीय भोजन (परम्परागत फ्लेमिश भोजन जस्तै stews धेरै मासु-भारी खाद्यान्नहरूको समावेश, meatballs, र mussels).
शहर को एक अधिक स्पष्ट दृश्य देख्न को लागी सुविधा Sint Germanuskerk हो, एक द्वारा topped उल्लेखनीय Romanesque चर्च यूनेस्को belfry र dating back to the 13th century. जुलाई र अगस्ट महिनामा, carillon संगीत ठाउँ लिन हरेक बुधवार. तपाईंको पात्रो थप्न!
Liege गर्न Tienen गाडिहरु
ब्रसेल्स गर्न Tienen गाडिहरु
एंटवर्प गर्न Tienen गाडिहरु
Namur गर्न Tienen गाडिहरु
3. Hoeilaart, फ्लेमिश Brabant
तपाईं सजिलै गर्न सक्छन् एक रेल समातेर मदत संग बचत गर्न रेल ब्रसेल्स. त्यसपछि यो एक छिटो तीस मिनेट सवारी दक्षिण शहर को Hoeilaart. यहाँ तपाईं पाउनुहुनेछ गेटवे Sonian वन र एक5सबैभन्दा आकर्षक लुकेको रत्न मा बेल्जियम भ्रमण गर्न!
यदि तपाईं प्रकृति अन्वेषण प्रेम, यो सिद्ध आधार, व्यस्त ब्रसेल्स बाहिर. वन संग्रहालय जनवरी वैन Ruusbroec भ्रमण, धेरै पैदल ट्रेल्स को एक अन्वेषण अघि वन सिक्न.
Hoeilaart अर्को लुकेका मणि छ; यो घर छ सबै भन्दा राम्रो अङ्गुर मा बेल्जियम. Hoeilaart एक पटक रूपमा चिनिएको थियो ग्लास शहर किनभने सबै को अङ्गुरको भरिएको greenhouses. उत्पादन वर्षौंदेखि कम छ, जबकि, Hoeilaart अङ्गुर अझै पनि देश वरिपरि बेशकीमती, र उनि चाँडै बाहिर बेच्न, यो सबै भन्दा राम्रो छ. सीधा जानुहोस् स्रोत मा आफ्नो हात प्राप्त गर्न तिनीहरूलाई.
लिले गर्न Hoeilaart गाडिहरु
एंटवर्प गर्न Hoeilaart गाडिहरु
Liege गर्न Hoeilaart गाडिहरु
4. आकर्षक लुकेका मणि – Tongeren, Limburg
भ्रमण जेठा शहर मा बेल्जियम. एक उपनाम दिइएको थियो यसको कारण धनी Gallo रोमन इतिहास. यो इतिहासको संकेत शहर भर देखिने छन्, तर सबै भन्दा राम्रो शुरुवात बिन्दु पुरस्कार विजेता गैलो रोमन संग्रहालय हो. Once you have steeped आफैलाई मा अन्तरक्रियात्मक प्रदर्शनकारी, एक स्वयं निर्देशित मा सडकमा हिट पैदल यात्रा टन्जेरेनमा इतिहासका तहहरू पत्ता लगाउन.
यो सानो शहर छ, दुई यूनेस्को सूचीबद्ध स्मारक, हाम्रो लेडी र beguinage को Basilica को belfry. को Beguines जीवन बारे जान्न, चर्च गर्न आफूलाई समर्पित गर्ने महिला, को Beguinage संग्रहालय Beghina मा. आइतवार, Tongeren सेनाहरूका Beneluxs ठूलो प्राचीन बजार, भन्दा बढी 350 इतिहास को सबै कालखंड बाट पुरानो पुरानो चीज बिक्री बिक्रेता हो.
तपाईं अझै पनि छ थियो छैन आफ्नो भर्न विगतमा5सबैभन्दा आकर्षक लुकेको रत्न मा बेल्जियम, को सुरम्य औपचारिक बगैचा मार्फत टहलने लागि नजिकैको Alden Beisen महल मा रोक्न.
Maastricht गर्न Tongeren गाडिहरु
Liege गर्न Tongeren गाडिहरु
Aachen गर्न Tongeren गाडिहरु
बन गर्न Tongeren गाडिहरु
5. आकर्षक लुकेका मणि – Binche, Hainaut
शहर को Binche मा बेल्जियम को क्षेत्र Hainaut देखिन्छ धेरै जस्तै अन्य साना शहरहरु मा Wallonia. यो एक निद्रा लागेको प्रकारको को ठाँउ संग मात्र एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण, मेला र मास्क को उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय संग्रहालय, वा माँ.
मा बुधवार ऐश गर्न को लागि प्रमुख दिन, Binche निद्रा लागेको तर केहि छ. Binche को कार्निवल संसारमा अद्वितीय र निश्चित लुकेका मणि छ! यो उत्सव विस्तृत वेशभूषा समावेश, संगीत, नृत्य, र पिउने र आनन्द को एक निष्पक्ष बिट! यो वास्तवमा यति विशेष छ, यो यूनेस्को द्वारा मानवता को मौखिक र Intangible विरासत को एक उत्कृष्ट नमुना रूपमा कुँदिएको छ.
यो परम्परा र समारोह आउटसाइडर्स गर्न पूर्ण inexplicable जस्तो गर्न सक्नुहुन्छ, luckily माँ छ, त्यहाँ सबै व्याख्या गर्न मा सुस्पष्ट विवरण. उपस्थित मेला को Binche छ साँच्चै अविस्मरणीय अनुभव.
ब्रसेल्स गर्न Binche गाडिहरु
एंटवर्प गर्न Binche गाडिहरु
लिले गर्न Binche गाडिहरु
रियम्स गर्न Binche गाडिहरु
को पत्ता लगाउन तयार5सबैभन्दा आकर्षक लुकेको रत्न मा बेल्जियम? त्यसपछि जानुहोस् एक ट्रेन सेव अब. कुनै लुकेका लागत संग मिनेटमा पुस्तक, बस लुकेको रत्न!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “5 सबैभन्दा आकर्षक लुकेको रत्न मा बेल्जियम” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhidden-gems-belgium%2F%3Flang%3Dne – (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#सेक्रेटबेलियम #ट्राभेलबिजियम #ट्रैभिडहेडगेम्स europetrains europetravel सेडगेज रेल यात्रा ट्राभेलबिजियम
रेल यात्रा चेक गणतन्त्र, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, रेल यात्रा हल्याण्ड, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, रेल यात्रा गर्नुभएको नेदरल्यान्ड्स, यात्रा युरोप